Meizu mBack သည်ကုမ္ပဏီ၏ bezel-less ဖုန်းများဖြစ်သော်လည်း | Androidsis
ဘက်ထရီမရှိသည့်မျက်နှာပြင်များသည်စမတ်ဖုန်းလောကတွင်ထိပ်တန်းအသွင်အပြင်များမဖြစ်လာမီသုံးစွဲသူများစွာအတွက်လက်ဗွေဖတ်ရှုသူများနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီသောသော့များကအသုံးပြုရန်အတွက် authentication method ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအမျိုးမျိုးတွင်ဤအိမ်သော့များသည် Meizu ထုတ်ကုန်အတော်များများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း multi-functional ဖြစ်စေသည်။ Meizu စမတ်ဖုန်းများ၏အိမ်သုံးခလုတ်များသည်ဆန်းသစ်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည် mBack နည်းပညာကိုသူတို့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက်သုံးစွဲသူတွေဟာ user interface ကိုဖြတ်သန်းပြီးအဓိကအမူအယာများကိုသုံးခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိူင်သည်။
Frontless Display ပါ ၀ င်သောကြောင့်ရှေ့အိမ်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်သော့အတွက်နေရာမရှိပါ ကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုဖော်ပြသည့်အတိုင်း Meizu သည် mBack နည်းပညာကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဂျက်ဝမ်သည်ကုမ္ပဏီ၏အသိုင်းအဝိုင်းပေါ်တယ်။ Meizu 16 သည်အလွန်အဆင့်မြင့်သော mBack ဗားရှင်းဖြင့်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် Home key မဟုတ်ပါ။ သင်မသိပါက Flyme OS နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းတွင်ကုမ္ပဏီသည်မျက်နှာပြင်အမူအယာများပါဝင်သည့် Super mBack နည်းပညာကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ခလုတ်ရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ ရှည်လျားသောဖိအားများနှင့်ပွတ်ဆွဲခြင်းများကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ကိုအလျင်အမြန်သွားနိုင်သည်။ ဒီတော့ဂျက်ဝုန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး၊ လာမည့် Meizu 16 စီးရီးနှင့် ပတ်သက်၍ mBack နည်းပညာနှင့် ပတ်သတ်၍ အခိုင်အမာရှိလိမ့်မည်.
ထုတ်လုပ်သူ၏ထုတ်လုပ်မှုပုံစံအသစ်ကိုသြဂုတ်လတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြင့်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။။ တစ်ခုမှာတပ်ဆင်ထားလိမ့်မည် အသစ် Mid-range Qualcomm Snapdragon 710ပိုမိုအားကောင်းသည့်မူကွဲတွင်အနိမ့်ဆုံး 845GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် 2.8-core Qualcomm Snapdragon 18 ချစ်ပ်ပါရှိသည်။ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မတူဘဲ Meizu သည် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် notched ဒီဇိုင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း bezel များမှာအလွန်နည်းပါးနေသေးသည်။ ဒါ့အပြင်အမျိုးမျိုးသောအချက်များအရသိရသည် ဘုတ်ပေါ်မှာ screen ပေါ်မှာလက်ဗွေဖတ်စက်ရှိလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu ၏ mBack သည်ကုမ္ပဏီ၏ bezel-less ဖုန်းများကြားမှမသွားနိုင်ပါ
သေခြင်းတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးသေခြင်းတရားကို ၀ င်ရောက်စေသောအသက်တာကိုသေစေခြင်း